အစ္စလာမ်ဆန့်ကျင်ရေးအသင်းတော်: မွတ်စလင်တစ်ဦး၏ ရင်တွင်းစကား
Labels: ဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်မှု, မှန်ပြောင်းများ, အစ္စလာမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ, ဆောင်းပါး
asdf112345 May 12, 2012 at 11:15 PM
မစ္စတာဟာဂျီဝက်စ်လီ ဟာ မနေ့တနေ့ကမှ အရုး ထောင်ကနေ
ဤ ဘလော့ပိုင်ရှင်ဟာ သူသေသွား ခဲ့ရင် ဘယ်လို ပုံဆံမျိုးနဲ့ သေမလဲ
ဘုရားမရှိ သာတနာ မသိတဲ့ သူုဖြစ်နေတယ် စိတ်မကောင်းပါဘူး
ဘာကိုမှ သေသေချာချာ သိပုံမရဘူး
မသိရင်မှတ်ထားပါ လူသားအကူအညီနဲ့ ဘုရားဖြစ်နေတဲ့သူ ကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခြင်းဟာ စစ်မှန်နိုင်ပါ့မလား
မိမိလုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ဘုရား အလိုသူတယ် ပြောလို့ မရဘူးလေ
အဲ့လို ပြောတာကိုက အသိညံ မရှိတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလား
စဉ်းစားတွေးခေါ် နိုင်အောင် ကြိုးစားစေချင်တယ် မြင်နေရတဲ့ ဘုရား ကို ယုံကြည်မဲ့ အစား မမြင်ရတဲ့ ဘုရားကို ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်
ဘယ်အရာမှန်မလဲ စဉ်းစားရင် အဖြေ ပေါ်ပါလိမ့်မယ်
ဝက်ကြီး April 2, 2013 at 6:12 AM
Ko Ko Gyi April 6, 2013 at 9:56 PM
ညီလေး asdf112345 ရေ.........
မင်းညီမ၊ မင်းအစ်မကို အဲဒီမမြင်ရတဲ့ အလာဟ်ဆိုတဲ့ အကောင်ကြီးက
အာဝါဟ ၀ိဝါဟ လုပ်ရင်တောင် သဘောကျငြိမ်ခံနေမယ်ထင်တယ်နော်။
မင်းညီမကို ငါက ၀ိဝါဟ လုပ်ဖူးတယ်ဆိုရင် မင်းမမြင်ရဘဲနဲ့ ယုံကြည်နေမှာလား။
Rain Moe July 4, 2013 at 9:46 PM
ဗမာပြည်သား July 20, 2013 at 5:38 AM
လက်တွေ့ကျမယ်သဘာဝလဲကျမယ် မယုတ်မာဘူးဆိုရင် အဆုံးအမဖြစ်ပါစေဦး ကိုးကွယ်မှာပဲ။လူသတ်ပါ(အယူမတူရင်)၊မုဒိန်းကျင့်ပါ။လူပွါးပါ။ဆိုတာကြီးကပြောတဲ့လူရောယုံတဲ့လူရော ကိုယ့်ဟာကိုစဉ်းစားးးးးးး
mg June 19, 2012 at 8:48 AM
မြင်နေရတဲ့ ဘုရား ကို ယုံကြည်မဲ့ အစား မမြင်ရတဲ့ ဘုရားကို ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်
့ha ha so funny good idea!
myomyanmar November 4, 2012 at 2:16 AM
ကြားဖူးတာလေးတစ်ခုပါ မင်းတို့ အဖေနဲ့အမေက မပြောပြလို့ငါပြောပြမယ်။ မင်းတို့ မမြင်ရတဲ့ဘုရားက ကမ္ဘာကြီးပြားတယ်လို့ ပြောသွားတယ်တဲ့ကွ။ တော်သေးတာပေါ့
ကိုးပါနီးကပ်က အသေခံပြီး ကမ္ဘာကြီးလုံးတာ ပြောသွားလို့
တစ်ကမ္ဘာလုံး ကမ္ဘာလုံးမှန်းသိသွားတယ်ကွ..အဲဒီလိုသာဆိုရင် ငါတို့ တွေကမ္ဘာလုံးတယ်လို့ အမှန်ကို အမှန်တိုင်းမသိတဲ့ မင်း တို့ရဲ့ ဘုရားထက် ကိုးပါးနီးကပ်ကို ကိုးကွယ်လိုက်စေချင်တယ်.. လောကမှာ အမှန်တရားဆိုတာ ရှိတယ်။ အဲဒါ ကြောင့် ဘာသာရေးဆိုတာ ဖြစ်လာတာ။ ဘုမသိဘမသိ နဲ့ သူများပြောတိုင်း(မင်းတို့ ပထွေးတွေပြောတိုင်း)ယုံမနေနဲ့ ။ အေး ကိုးကွယ်စရာမရှိရင် ငါ့ကိုလာကိုးကွယ်။ မင်းတို့ ဘုရားထပ်တော့ ငါ က ပိုမြတ်တယ်ကွ..
salim February 25, 2013 at 11:15 AM
D BLOG KO YAE TAE KAUNG KO LEE BAL
TAY GYIN SO NAE TAY MAE KAUNG TWE
BAR TAR YAE KO A PYIT TIN TAE KAUNG TWE AH LONE MA KYAR KIN AH LONE A TAY SOE NAE TAY PAR SAE
Linn Thit Soe March 30, 2013 at 4:14 AM
ကမ္ဘာသိတဲ့လူသတ်ပွဲတွေကို အစ္စလာမ်တွေက ကျူးလွန်ကြပြီး . . .မြန်မာမှာ အိမ်ရှင်ကို ရိုက်ထုတ်ပြီး ဧည့်သည်က ကုလားထိုင်ဝင်ထိုင်ချင်ကြတယ် . . .။ငါတို့မြန်မာတွေ မင်းတို့ကို ဗလီဆောက်ခွင့်ပေးထားလို့ သောကြာနေ့တိုင်း မင်းတို့ရဲ့ အော်သံလိုလို အူသံလိုလို အသံတွေ အော်ခွင့်ရှိနေတာလေ . . .။ အိမ်ရှင်ဗမာကို မစော်ကားနဲ့ . . . မျိုးကန်းသွားမယ် . . .။
ဝက်ကြီး April 2, 2013 at 6:15 AM
mrmonn May 26, 2013 at 7:43 PM
Satka Liak October 31, 2013 at 11:24 AM
မာမွတ်အောင်နက်တို့ ဟာဂျီထိတ်ပြဲတို့ ကအလာရှင်ဂုတ်ကျားကြီး
နှာထတဲ့ ဆောက်ဖုတ်ကြီးကို ကိုးကွယ်နေကြတာ ဟန်လုပ်ပြီး
မမြင်ရတဲ့ ဘုရားဆိုပြီး ရွှီးမနေပါနဲ့ ..ရွံတယ်.....